Nezvedu - Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd.
DongguanDongwangda Precision Technology Co, Ltd. inyanzvi yepamusorosoro ine makore mazhinji ehunyanzvi ruzivo uye inogadzira kugadzirwa kwemahombekombe mazhinji eR & D yakasarudzika, dhizaini, chaiyo CN kugadzirisa, uye nemazvo pepa simbi kugadzira. Vashandi vekambani vaunganidza hupfumi Dhizaini uye ruzivo rwekugadzira uye hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji; Isu tinopa masevhisi ehunyanzvi uye rutsigiro rwehunyanzvi rwevatengi mumaindasitiri mazhinji, inoshandisa michina yemotokari, zvigadzirwa zvemadhijitari, zvigadzirwa zvemakomputa, zvigadzirwa zvekudzivirira zvechiuto, zvekurapa, zvekushandisa mukicheni, matoyi, zvishongedzo zvehurongwa Kuonekwa kwemhando yekugadzira, dhizaini uye kugadzirisa kugadzirisa, nezvimwe uye kugadzirwa kwakawanda.
Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd. iri mune rakakurumbira guta muChina. Iwo makuru zvigadzirwa ndeaya: zinc alloy ruoko modhi, ruoko modhi, ruoko modhi kugadzirisa, ruoko fekitori, aruminiyamu chiwanikwa kugadzirisa, kunyatsoita uye kuomarara aruminiyamu chiwanikwa, batch chigadzirwa kugadzirwa, yakaoma chaiyo zvikamu zvikamu Kugadziriswa kwezvirimwa, nyore chakuvhuvhu kugadzira zvirimwa, nezvimwe. vakapakata yemhando huru-pamwero kunyatsoita cnc machine nzvimbo, lathes, azvikuya michina, grinders, dzomoto michina, Vacuum anoumba uye nezvimwewo zvinhu michina, pamwe yakavimbika unhu, akakwana mamiriro, uye kutsanya kumumvuri yokutevedzera. Inopa mamiriro akanaka kune vatengi kutanga zvigadzirwa zvavo uye kutora mikana yebhizinesi. Yedu manejimendi timu iri diki, ine simba, uye inopayona. Tine boka revashandi vane ruzivo, vanoshanda uye vanongwarira, uye nzvimbo yedu yebasa yakachena uye yakashambidzika. Zvese izvi zvinopa vimbiso yakakwana yekugadzirwa kwemhando yepamusoro yemhando dzemhando.
Iyo kambani parizvino ine bhizinesi manejimendi manejimendi manejimendi, inogara ichisimbisa manejimendi manejimendi, inovandudza hunyanzvi hwehunyanzvi uye manejimendi kugona kwevashandi, uye "inohwina kuvimba kwevatengi nehunhu, inohwina kuvimba kwevatengi netekinoroji, inohwina kugutsikana kwevatengi nebasa, uye inokunda vatengi ne kuvimbika "" Kufarira "ndicho chinangwa chevandinoshanda navo vese. "Kubudirira kwepamusoro, mhando yemhando yepamusoro, nguva yekuendesa, kugutsikana kwevatengi" inongedzo yekuvandudzwa kwevese vandinoshanda navo. Ini ndinotenda kuti chete hwaro hwakasimba hunogona kuita leapfrog kufambira mberi. Iyo kambani yagara inonamatira kune mweya we "kubatana, kupayona, kushanda nesimba uye kufambira mberi" uye iyo "yevasungwa, kubatsirana, kuonga" bhizinesi uzivi. Kubva pamisimboti yevimbiso yehunhu, mutengo unonzwisisika, kuendesa nekukurumidza uye kunangana nebasa, zvinotora zvakasikwa neChina sebasa rayo uye zvinogadzira simba-rekuchengetedza Simba Chinangwa chenguva "kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza neketani remaindasitiri, kubva pachigadzirwa utsanzi kusvika kuindasitiri utsanzi. ". Mbiri yekambani iyi yakagamuchirwa zvakanaka nevatengi.
Shouban modhi-Hardware, mapurasitiki, zvemagetsi uye zvimwe zvigadzirwa dhizaini uye kutsvagisa uye kusimudzira, Shouban modhi inogadzira, dhizaini dhizaini uye kugadzira, chigadzirwa kugadzirwa kwemazhinji, zvikamu zvekugadzirisa, michina yekugadzira michina. Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd. inoshandisa zvizere nyika yepamberi CAD / CAM / CAE software: PRO / E, UG, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD, uye inotora kubva kune dhizaini, inodzosera huinjiniya, dhizaini dhizaini, kugadzira prototype kugadzirwa, chakuvhuvhu kugadzirwa kune batch mangé Kugadzirwa kweimwe-yekumira sevhisi kunopfupisa zvakanyanya kugadzirwa kwechigadzirwa, kunochengetedza mari yekuvandudza, uye kunatsiridza kukwikwidza kwemusika kwezvigadzirwa
1. Hardware sampuro yekugadzira: (Chinyorwa: aruminiyamu chiwanikwa, zinc chiwanikwa, tsvuku mhangura, ndarira, magnesium chiwanikwa, tantalum, nickel chiwanikwa kutsika, kukotama, nezvimwewo);
2.C CNC chaiyo ruoko bhodhi kugadzirwa (zvishandiso ABS, PC, PP, POM, PMMA, PA, PPS, PE, Bakelite, nezvimwewo)
3. Vacuum kusanganisa (diki batch) (Chinyorwa: ABS, PC, PP, PMMA, PVC, rabha, yakanyanya tembiricha inodzivirira zvinhu, nezvimwewo);
4. Laser yekukurumidza prototyping modhi, SLA, SLS;
5. Simple mold: inonyanya kushandiswa mukugadzira kwakawanda, kupfupika kwevhu kuvhura kutenderera, yakachipa chigadzirwa mhando uye zviitwa kuita zvinoenderana neyakaumbirwa muforoma;
6.Surap kurapwa senge mafuta anopfapfaidza, kubheka lacquering, guruva, silika yekudhinda screen, electroplating, oxidation, laser kuvesa, waya kudhirowa, nezvimwe.
1. Industrial chigadzirwa dhizaini, 3D dhizaini dhizaini;
2. Mota, midhudhudhu, matoyi mota, uye dzimwe nzira dzekutakura uye dzakasiyana dzakasiyana uye zvidiki zvikamu;
3. Zvigadzirwa zvekutaurirana senge nhare, michina yefakisi, nharembozha, mawalkie-kutaura, uye mabhero eintercom;
4. TVs, monitors, mhepo inodziya, ma vacuum cleaner, humidifiers, uye zvimwe zvigadzirwa zvemumba;
5. Zvidhori zvetoyi, zviyero zvekufananidza, zvakasarudzika zvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa fekitori, zviito zvekuita;
6. Kugadzirwa kwemhando dzakasiyana dzealuminium alloy simbi prototype mamodheru, hombe aluminium alloy uye epurasitiki jekiseni zvigadzirwa;
7. Zvikamu zvakasiyana zvemuchina, B-michina, zvigadzirwa zvemagetsi, nemidziyo yekurapa;
8.Mechanical action zino bhokisi, SLA inokurumidza prototyping;
9. Bvisa michina yakawanda-yevhu, jekiseni remafuta, kudhinda kwechidzitiro, dhizaini waya, nezvimwe.
5 Sekaiichi CNC Lathe, Cnc Machining Center Kugadziriswa, Cnc Ruoko Bhodhi Kugadziriswa, Cnc Stainless Simbi Kugadzira, Machina Zvishandiso Shell, Cnc Precision Zvikamu Kugadziriswa,